အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်အဘို့အ Solotech အကောင်အထည်ဖော်မှု 12G-SDI လုပ်ငန်းအသွားအလာ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Solotech Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်အဘို့အ 12G-SDI လုပ်ငန်းအသွားအလာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော
Solotech Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်အဘို့အ 12G-SDI လုပ်ငန်းအသွားအလာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော
Fremont, CA - ဇွန်လ 12, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ ASTROLab တောင်ပိုင်းကျူးဘက်မှာရှိတဲ့ Mont-Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒလှုပ်ရှားမှုစင်တာ, ပတ်ပတ်လည်သစ်တစ်ခု 12G-SDI AV စနစ်နှင့် streaming များလုပ်ငန်းအသွားအလာတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း တစ်ဦး ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, Blackmagic eGPU နှင့် Blackmagic က်ဘ်တင်ဆက်မှုများအပါအဝင်ထုတ်ကုန်။ သူတို့ကိုကမ္ဘာတဝှမ်းပရိသတ်တွေရန်တင်ပြချက်များ stream အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပြုအသစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအင်အားကြီး၎င်း၏အပြန်အလှန်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာ ASTROLab ရဲ့နေ့စဉ်သိပ္ပံတင်ပြချက်များ။
ထုံးစံ 4K တပ်ဆင်ခအထူးသ Solotech, နိုင်ငံတကာကစနစ်တွေပေါင်းစည်းမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ System Integration ကဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းစွာCéline Dion, Justin Timberlake, Cirque du Soleil, Center ကVidéotron, Staples Center, Bridgestone Arena နှင့်အတူ၎င်း၏အလုပ်အတွက်လူသိများခဲ့သည် နှင့်ပိုပြီး။
မိုဃ်းညနှင့် nocturnal ပတ်ဝန်းကျင်၎င်း၏ခြွင်းချက်အရည်အသွေး designated ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးကာကွယ်ထား IDA အမှောင်က Sky ဘေးမဲ့တောများတွင်တည်ရှိပြီးအဆိုပါ ASTROLab အားလုံးဧည့်သည်များအတွက်သိပ္ပံလက်လှမ်းအောင်မှမြှုပ်နှံမယ့် 95 ထိုင်ခုံခနျးနှင့်နက္ခတ္တဗေဒလှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပြချက်များမျက်နှာပြင် '' 27 အားဖြင့် '' တစ်ဦး 18 အပေါ် projected နှင့်ထိုကဲ့သို့သော cosmology, အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေး, အလင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ထိုအထောကျပံ့ဖို့, ASTROLab, Smart Videohub 4G 12 × 40, HyperDeck စတူဒီယို 40G, Blackmagic Web ကိုပစ္စုပ္ပန်နှစ်ခု Blackmagic eGPUs နှင့် 12 Teranex Mini ကို converters အဖြစ် ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 16K အသုံးပြုသည်။
ဖြစ်နိုင်သမျှအဖြစ်တင်ဆက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနေသောနှင့်အပြန်အလှန်စေခြင်းငှါ, ASTROLab တစ်ချိန်တည်းမှာစင်ပေါ်မှာနှစ်ခုတင်ပြလိုအပ်သည်။ ဒုတိယအစစ်အမှန်အပေါင်းတို့၌အလင်းရောင်, အသံနှင့်ဗီဒီယိုပရိုဂျက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, Smart Videohub 12G 40 × 40, HyperDeck စတူဒီယို 12G နှင့် Blackmagic eGPUs စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦး panel ကိုလည်ပတ်စဉ်အဓိကတင်ဆက်သူ, ပေးထားသောခေါင်းစဉ်မှတစ်ဆင့်ပရိသတ်ကိုလမ်းလျှောက် အချိန်။
ကျွန်တော်နှင့်အတူအရပျ၌ရှိ "ဒီစနစ်က Blackmagic ဒီဇိုင်း လုံးဝချောမွေ့စွာတစ်ဦးတင်ပြချက်စဉ်အတွင်းပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအကြားကူးပြောင်းစေသည်။ ယင်းတင်ပြချက်များ scripted နေချိန်မှာကျနော်တို့ပရိသတ်ကိုပါဝင်မှုနှင့်မေးခွန်းများကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ အဆိုပါ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့်စမတ် Videohub 12G 40 × 40 နှင့်အတူကျနော်တို့ချက်ချင်းဖွင့်မယ့်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, စက္ကန့်တဲ့ကိစ္စအတွင်းလက်တန်းစကားပြောဆိုမှုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ပုံရိပ်တွေကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်, "Guillaume Poulin, အ ASTROLab ရဲ့အကြီးတန်းတင်ပြတစ်ဦးကဆိုသည် ။
သူတဦးတည်းကနေပြောင်းပါ "ဆက် HDMI အခြားမှ signal ကိုအများကြီးပိုပြီးအချိန်ယူမယ်လို့နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ချောမွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါ SDI အဆငျ့မှာစမတ် Videohub 12G 40 × 40 ရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုတောင်မှပိုမြန်ပြဇာတ်ရုံလုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ "
ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဗီဒီယိုထိုကဲ့သို့သောကြီးမား screen ပေါ်မှာစီမံကိန်းနေကြသည်ကတည်းကကပရိသတ်ကိုတစ်ချောမွေ့နှင့်အဆင်ပြေမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံအတွက်စက္ကန့်လျှင် 12 ဘောင်မှာ 4G-SDI 60K မှာ run ဖို့ ASTROLab ရဲ့ content များအတွက်အရေးပါပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်ရန်ရန်, ASTROLab အဖွဲ့သည်တစ်စက္ကန့်4ဘောင်မှာ 60K အတွက် output ကိုနှစ်ခုအချက်ပြမှုများငှါ, ပြဇာတ်ရုံ control panel ကိုတစ်ခုချင်းစီကွန်ပျူတာများအတွက်တဦးတည်းထဲသို့နှစ်ခု Blackmagic eGPUs ထည့်သွင်း။ ထို့အပြင်အဆိုပါ Blackmagic eGPUs ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပုံတွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအကြားလက်ငင်းချောမွေ့စွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းဘို့အကျိုးရှိသောအရာ, ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်မြှင်။ သီးခြားစီအပေါင်းတို့, ဗီဒီယိုကသွင်းအားစုအတွက် Teranex Mini နှင့်အတူ 12G-SDI ကူးပြောင်းရ။
Poulin အကောင်အထည်ဖော်မတိုင်မီက "ရှင်းပြခဲ့ Blackmagic ဒီဇိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်စက္ကန့်4ဘောင်မှာ 60K အတွက် screen ပေါ်မှာစီမံကိန်းအကြောင်းအရာကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ တစ်စက္ကန့် 24 သို့မဟုတ် 30 ဘောင်မှာ image ကိုကျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက Galactic ပျံသန်းမှတဆင့်နဲ့တူနက္ခတ္တဗေဒရိုက်ကူးများအတွက်အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အရွယ်အစားမျက်နှာပြင်တွင်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု amplified နှင့်ကြည့်ရှုသူများအတွက်အနေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အခြားမည်သည့်ဂီယာနှင့်အတူဤအောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းနှစ်ဦးစလုံးနည်းပညာပိုင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးတစ် strain ခဲ့ပါတယ်။ "
Ghislain Veronneau, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းမန်နေဂျာ, Solotech, "အရကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုမှာ 12 FPS မှာ 4G-SDI 60K အတွက်မျိုးစုံသောဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအကြီးအကျယ် screen ပေါ်မှာဝယ်လိုအားအပေါ်လုံးဝအရည်လက်ဝါးကပ်တိုင််လည်းကြွေတတ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ဘောင်အပြင်က client ကိုနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကနေ 12G-SDI 4K နည်းပညာနှင့်အတူ Blackmagic ဒီဇိုင်းကျနော်တို့ ASTROLab ဘို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးမိမိစိတ်ကြိုက်ဘတ်ဂျက်သတိဖြေရှင်းချက်မကယ်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ကြောင်း rendering screen ပေါ်မှာနောက်ဆုံးထူးခြားတဲ့ဖြစ်၏။ "
နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့, အ ASTROLab ကဗီဒီယိုကွန်ဖရကနေတဆင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းစာသင်ခန်းသို့တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ရောက်စေဖို့တစ် Blackmagic Web ကိုတင်ဆက် leverages ။
"ဒီ Blackmagic Web ကိုတင်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်များဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားကြည့်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်, ရုပ်ပုံမြင်ကွင်းထဲမှာ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K ရဲ့ရုပ်ပုံလက်ရှိတွင်ခနျးမတှငျပြသခံရသည့်ပုံရိပ်ကိုကျောင်းသားများအားဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်စဉ်ကိုအထက်ထောင့်ပြောနေတာကတော့တင်ဆက်ပြသခွင့်ပြု, "Poulin ကဆိုသည်။
, Mont Méganticအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့ ASTROLab ဖို့ဘတ်ဂျက်သတိ 12G-SDI 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာပို့ဆောင်အပြင် Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖြေရှင်းချက်ကလွယ်ကူသစ်ကိုတင်ပြလျင်မြန်စွာမြန်ဆန်မှတက်လာရန်အဘို့အစေ။
Poulin ငါတို့သည်အချို့သောအကြီးတန်းဝန်ထမ်းရှိသော်လည်း, ငါတို့သည်လည်း လာ. ထိုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးလအဘို့ငါတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်တဲ့သူနွေရာသီကျောင်းသားများကိုရှိတယ် "ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သူတို့အချိန်ထိုကဲ့သို့သောအတိုကာလအတွက်ကဒီမှာနေကတည်းကသူတို့ကပြဇာတ်ရုံနည်းပညာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏သေးငယ်သောအသေးစိတျအပေါငျးတို့သကျွမ်းကျင်ဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး။ အဆိုပါ Blackmagic ဒီဇိုင်း workflow နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုလူတိုင်းအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးစီမံခန့်ခွဲဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ "
ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K ၏ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ, စမတ် Videohub 12G 40 40, HyperDeck စတူဒီယို 12G, Blackmagic က်ဘ်တင်ဆက်မှု, Blackmagic eGPU, Teranex Mini ကို, လူအပေါင်းတို့သည်အခြား× Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images.
လွန်ခဲ့တဲ့ 40 နှစ်အတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Solotech ကနေဒါ 13 မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနှင့်အတူအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာလောကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 300 ကျော်ကြားတဲ့ထုတ်လုပ်သူကျော်လွှမ်းခြုံထားတဲ့စာရင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Solotech အသံ, ဗီဒီယို, အလင်းရောင်, မသမာမှုများနှင, ပျော့ပျောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာကအမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်များတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းရေးအတွက်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်မှု, အမည်ရဂီတ, အားကစား, စီးပွားရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုသည်။ Solotech Montreal မှာ Quebec စီးတီး, Saguenay, Ottawa, တိုရွန်တို, Las Vegas မှာ, Nashville, DeKalb တည်ရှိသော၎င်း၏ရုံးခန်းအတွင်းရှိ 1,200 ပညာရှင်များန်ထမ်း, Los Angeles မြို့, Heywood, လန်ဒန်နှင့် Redditch ။ ပိုပြီးအချိန်၌ထွက်ရှာပါ: www.solotech.com ။
အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX သင်ခန်းစာစီးရီး၏ဂိမ်းမှ Epic Finish ကိုဦးလွတ်မြောက်: နဂါး - အောက်တိုဘာလ 4, 2019
12G လုပ်ငန်းအသွားအလာ ASTROLab blackmagic Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K Blackmagic ဒီဇိုင်း eGPU Blackmagic က်ဘ်တင်ဆက်မှု ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု Mont-Megantic post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 Solotech လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-12
ယခင်: ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ
နောက်တစ်ခု: InfoComm 4097 မှာ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက် 2019 Choir မိုက်ကရိုဖုန်း